Ex Xildhibaan Saalax Badbaado oo ahaa ninkii fuliyay qaraxii agagaarka Garoonka Diyaaradaha – STAR FM SOMALIA
Ex Xildhibaan Saalax Badbaado oo ahaa ninkii fuliyay qaraxii agagaarka Garoonka Diyaaradaha
Al-Shabaab ayaa sheegtay in Saalax Badbaado oo horay u ahaa Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaankii KMG uu ahaa ninkii fuliyay weerarkii is qarxinta ahaa ee ka dhacay agagaarka Garoonka Diyaaradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho.
Idaacada A-Andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa baahisay codka mid ka mid ah raggii fuliyay weeraradii is qarxinta ahaa ee ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaradaha
Cod laga duubay ka hor inta uusan fulin weerarka ayaa Saalax Badbaadow ayaa uu kaga hadlay weerarka uu fulinayo iyo ujeedka uu u socdo, isagoo dardaaran u diray shacabka Soomaaliyeed iyo dagaalyahanada Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa uu fariin u diray shacabka ka soo jeeda deegaanada Gobolada Waqooyi ee Somaliland, halkaasoo uu deegaan ahaan ka soo jeedo.
Saalax Nuux Ismaaciil (Saalax Badbaado) ayaa ka mid ahaa Baarlamaankii KMG, waxaana sanadkii 2010 uu ka goostay Baarlamaanka, kuna biiray Al-Shabaab.
Nabad Suggida oo Muqdisho ku qabatay gaari waxyaabaha qarxa iyo hub ay saaran yihiin
Dabaaldegyo caawa ka socda magaaloyinka waaweyn ee degaanada Puntland (Daawo Sawirro)